Soosaarayaasha & Shirkadaha Boorsada - Warshadda boorsada jeebka Shiinaha
Mudanayaal jeebka jeebka ugu weyn nooca 2020 taleefanka boorsada mobilada cusub ee Kuuriyada Woqooyi
Boorsada xajmiga weyn ee awoodda leh waxay ka kooban tahay tayo sare leh, caafimaad iyo bay'ad bey'adda u fiican PU. Qaabka labiska ah, midabada hodanka ah, biyuhu aan la celin karin, qoyaan-caddeynta, cimri dheeri ah, dareen wanaagsan oo gacmo furan ayaa lagu nadiifin karaa maro qoyan.
Boorsada ragga ee qaybta khafiifka ah ee dhererka toosan ee qaybta toosan 3 laablaabida booska kaararka badan awood ballaaran moodada boorsada cusub
tayo sare leh oo jawi jawi jawi jawi wanaagsan ah, biyo-celin ah, qoyaan-caddeyn ah, neefsasho leh, hab fudud oo jilicsan boorsada, dareen raaxo leh, hadiyado ganacsi, xuska safarka, doorashada ugu wanaagsan hadiyado xafladaha dhalashada.
Mudanayaal cusub ayaa jeebka jeebka ugu dhejisan boorsada jeebka dheer
Shandaddan toosan ayaa laga sameeyay agab tayo sare leh oo agab PU ag ah iyo midab gacanta kujira. Qaabka midabka u eg, midabyo kala duwan oo moodada leh, qurxinta dusha sare ee timaha, biyo-celinta, qoyaan-caddeynta, xoog iyo cimri dherer leh, qaab buuxa ayaa dareemaya wanaag, waxaa lagu nadiifin karaa maro qoyan.
Shandada jeebka dheer ee jeebka boorsada jeebka ganacsigu wuxuu jeexjeexaa ragga
Waxa laga sameeyay maqaar tayo sare leh oo bay'adda PU ah. Waxay dareemeysaa fiicnaan waxaana lagu nadiifin karaa maro qoyan. Biyo-celin, neef-qaadasho, jilicsan oo siman, tayo sare leh.
Tani waa boorsada-awoodda oo ballaaran oo leh naqshad retro ah, oo laga sameeyay tayo tayo sare leh, bay'ad deegaanka ah iyo maqaar caafimaad oo PU ah. Biyo-diid, qoyaan-caddeyn, midab fara badan oo moodada leh, raaxo leh inaad dareento, qurux iyo cimri dheer.
Boorso boorso gacmeed cusub oo boorso xaashi dheer ah oo boorso xajmi badan ragga shaqeysa
Si taxaddar leh loo doortay tayo sare leh bey'adda PU maqaar u leh. Taabasho jilicsan, qaab buuxa, oo lagu nadiifin karo maro qoyan.
Dharka cusub ee Dharka Casriga ee ragga cusub
Waxay ka samaysan tahay tayo sare, caafimaad iyo bay'ad deegaanka u fiican PU maqaar. Tayada aad u fiican, biyuhu biyuhu ka daboolnaan karaan, neefsashada lagu celin karo, taabasho fiican, oo lagu nadiifin karo maro qoyan.
Boorsada Dharka Dheef-shiidka ee Dharka Dheef-shiidka ee ragga oo caadi ah
Waxyaalaha PU ee bay'adda u habboon ayaa laga doorbidayaa, biyuhu aan la celin karin, qoyaan-caddeyn, jilicsan iyo caafimaad. Waxay cabbirtaa 3.9 inji x 3.5 inji x 1.2 inji (qiyaastii 10 cm x 9 cm x 3.2 cm) oo culeyskeedu yahay 110 garaam.
Dharka cusub ee jeebka jilicsan ee booska-khafiifka ah booska-kaarka ah 3 laablaabiya dhalinyarada zipper safka jilicsan ee ganacsiga jilicsan
Naqshadeynta awoodda ballaaran ee boorsada ayaa si wax ku ool ah u hanan karta baahiyada oo dhan. Waxay leedahay 8 goobood oo lagu kaydiyo kaararka deynta, kuwaas oo buuxin kara baahiyaha ganacsiga maalinlaha ah, safarka iyo dukaamaysiga.